लोकतन्त्रको रक्षा गोली चलाएर नै हुने हो ? - USNEPALNEWS.COM
लोकतन्त्रको रक्षा गोली चलाएर नै हुने हो ?
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा गृहमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
उसबेलाको `प्रजातन्त्र´ले गोलि चलाएरनै आफ्नो रक्षा चाहेको भए थुप्रै हुरि,चट्याङ र बादलहरु बेपत्ताको लिस्टमा पुग्ने थिएनन् र ? सहादतको सुचिमा भलै हामी कयौंको नाम
पेट्रोलमा प्रतीलिटर दुई, डिजल र मट्टीतेलमा १.५० रुपैयाँले बृद्दी
डेढ बर्षभित्र प्रचण्ड बनेर देखाउने पुष्पकमल दाहालको घोषणा